नेपालको पवित्र ठाउँ जहाँबाट नेपालका १५ जिल्ला र भारतको रुपैडिया समेत देख्न सकिन्छ | सुदुरपश्चिम खबर
नेपालको पवित्र ठाउँ जहाँबाट नेपालका १५ जिल्ला र भारतको रुपैडिया समेत देख्न सकिन्छ
नेपालकै एक यस्तो ठाउँ जहाँबाट नेपालका १५ जिल्ला र भारतको रुपैडिया समेत देख्न सकिन्छ कुमाख धार्मिक एवम् प्राकृतिक पर्यटकीय स्थल हो । यहाँ पुग्न सल्यान सदरमुकाम खलंगाबाट आठ घण्टा पैदलयात्रा गर्नुपर्छ ।
समुद्री सतहदेखि २ हजार ५ सय ३७ मिटर उचाइमा रहेको कुमाख जिमाली, मर्मपरिकाँडा र सिद्धेश्वरी गाउँको संगम पनि हो । कुमाख पहाडका विभिन्न स्थानमा रहेका दर्जनौँ गुफा आकर्षक पर्यटन केन्द्र बन्न सक्छन् ।
कुमाखमा रहेको सिद्ध गुफा निकै रमणीय छ । स्थानीय बासिन्दा कर्ण चलाउनेले अवलोकन र पूजाआराधनाका लागि थुप्रै मानिस गुफामा आउने बताए । ‘हरेक गुफामा रहेका विभिन्न खालका आकृति असाध्यै सुन्दर छन्,’ उनले भने ।
स्थानीयले कुमाखमा रहेको गुफाबाट पठाएका कुकुरहरू बाँझकाँडाको मोख्ला र कालागाउँको थदरामा रहेको गुफाबाट निस्किएकाले यहाँका गुफा निकै लामा भएको अनुमान गरिन्छ । ‘बूढापाकाले गुफाको लम्बाइ पत्ता लगाउन ककुर पठाएको सुनाएका थिए,’ जिमालीका लीलाधर रेग्मीले भने, ‘तर, गुफाको ५० मिटरभन्दा तल कोही गएका छैनन्
।’ कुमाखको टुप्पोबाट १५ जिल्लाका भूभाग देख्न सकिन्छ । यहाँबाट भारतको रुपैडिहासम्म देख्न सकिन्छ । कुमाख पहाडमा उच्च पहाडी जंगलमा पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटी, वनस्पति र फूल पाइन्छन् । त्यस्तै, दुर्लभ मानिएका चराचुरुंगी र जंगली जनावर पनि यहाँ पाइन्छन् ।
कुमाखमा दृश्यावलोकनका लागि ‘भ्यू–टावर’का रूपमा विकास गर्नसके आन्तरिक पर्यटनका साथै बाह्य पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन यहाँ रहेको सिद्ध मन्दिर र त्यसदेखि केही तल रहेको जिमालीतर्फको समथर भूभागमा मेला लाग्ने गर्छ । मेलामा आसपासका विभिन्न गाउँका बासिन्दाले स्थानीय लोकसंस्कृति झल्कने टप्पा, सोरठी, पैसेरी, झाप्रे, सरिंगेजस्ता नाच प्रदर्शन गर्छन् ।
संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरेर कुमाखलाई राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । यो ठाउँ जादा आफ्नो रोग दुख अभाव नास हुने आम बिश्वास रहेको छ त्यसैले तपाईं नपुगे पनि एक सेयर गरेर भगवान प्रती आस्था राख्नुहोला । frommandu
डिशहोमका प्रयोगकर्तालाई बैंकक घुम्न जाने सुनौलो अवसर !!
आज अप्रिल १ अर्थात अप्रिल फूल डे कसरी सुरु भयो मुर्ख बनाउने चलन ?
के तपाईंको कपाल धेरै झर्छ ? अपनाउनुस यस्तो उपाय !